Imimmisele yenkonzo - WebM.to
WebM ukuya kwi-MP4
Imigaqo yeNkonzo yeWebhu
Ngokungena kwiwebhusayithi ku- https : Ukuba awuvumelani nayo nayiphi na le miqathango, awuvumelekanga ukuba usebenzise okanye ufike kule ndawo. Izinto eziqulathwe kule webhusayithi zikhuselwe ngumthetho osebenzayo welungelo lokushicilela kunye nophawu lwentengiso.
Imvume inikiwe ukukhuphela okwethutyana ikopi yezixhobo (ulwazi okanye isoftware) kwiwebhusayithi yeWebM.to yokujonga okungahambelani nokuthengisa kuphela. Esi sisibonelelo selayisensi, hayi ukuhanjiswa kwetayitile, kwaye phantsi kwelayisensi awunako:
lungisa okanye ukope izixhobo;
ukuzama ukubola okanye ukuguqula injineli nayiphi na isoftware equlathwe kwiwebhusayithi yeWebM.to;
susa naliphi na ilungelo lokushicilela okanye olunye uhlengahlengiso lobunini kwezixhobo; okanye
Eli phepha-mvume liya kuyeka ngokuzenzekelayo ukuba wophula nakuphi na kwezi zithintelo kwaye unokuyekiswa yiWebMMto nanini na. Emva kokuphelisa ukujonga kwakho ezi zinto okanye xa kupheliswa iphepha-mvume, kufuneka utshabalalise naziphi na izinto ezikhutshelweyo onazo nokuba zikwifomathi yombane okanye eprintiweyo.
Izinto ezikwiwebhusayithi yeWebM.to zibonelelwa ngesiseko 'njengoko sinjalo'. I-WebM.to ayenzi ziqinisekiso, zichaziweyo okanye zichaziweyo, kwaye ngokwenjenje iyazikhaba kwaye iyazishiya zonke ezinye iiwaranti kubandakanya, ngaphandle komda, iziqinisekiso ezichaziweyo okanye iimeko zokurhweba, ukulungela injongo ethile, okanye ukungaphuli mthetho wepropathi okanye okunye ukunyhashwa kwamalungelo.
Ngaphaya koko, iWebMM.to ayigunyazisi okanye yenza naziphi na izimvo malunga nokuchaneka, iziphumo ezinokubakho, okanye ukuthembakala kokusetyenziswa kwemathiriyeli kwiwebhusayithi yayo okanye ngokunxulumene nezinto ezinjalo okanye nakweyiphi na iisayithi ezinxulumene nale ndawo.
Akukho meko apho iWebMM.to okanye abathengisi bayo baya kuba noxanduva lomonakalo (kubandakanya, ngaphandle komda, umonakalo wokulahleka kwedatha okanye wenzuzo, okanye ngenxa yokuphazamiseka kweshishini) ngenxa yokusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa izixhobo kwiWebM.to iwebhusayithi, nokuba iWebMM.to okanye iWebMM kummeli ogunyazisiweyo wazisiwe ngomlomo okanye ngembalelwano malunga nokwenzeka kolo monakalo. Ngenxa yokuba eminye imithetho ayikuvumeli ukusikelwa umda kwiziqinisekiso ezichaziweyo, okanye umda woxanduva ngenxa yomonakalo owenzekayo okanye owenzekayo, oku kusikelwa umda akunakusebenza kuwe.
Izinto ezibonakalayo kwiwebhusayithi yeWebM.to zinokubandakanya iimpazamo zobuchwephesha, zokuchwetheza, okanye zokufota. IWebMM.to ayiqinisekisi ukuba naziphi na izinto ezikwiwebhusayithi yazo zichanekile, ziphelele okanye zangoku. IWebMM.to inokwenza utshintsho kwizinto eziqulathwe kwiwebhusayithi yayo nanini na ngaphandle kwesaziso. Nangona kunjalo iWebM.to ayenzi ukuzibophelela ekuhlaziyeni izixhobo.
IWebMM.to ayijonganga zonke iisayithi ezinxulunyaniswe kwiwebhusayithi yayo kwaye ayinaxanduva lokuqulathwe kuyo nayiphi na indawo enxibelelene nayo. Ukubandakanywa kwayo nayiphi na ikhonkco akuthethi ukuxhaswa yiWebM.to yendawo. Ukusetyenziswa kwayo nayiphi na iwebhusayithi enxulumene noko kusemngciphekweni womsebenzisi.
IWebMM.to inokuhlaziya le migaqo yenkonzo kwiwebhusayithi yayo nanini na ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukuba ubotshelelwe luhlobo lwangoku lwemiqathango yenkonzo.
WebM ukuya kwi-AVI
WebM ukuya kwi-WMV
WebM ukuya kwi-MOV
WebM ukuya kwi-MPG
WebM ukuya kwi-DIVX
WebM ukuya kwiWebM
WebM ukuya kwi-MPEG-2
WebM ukuya kwi-FLV
I-WebM ukuya kwi-3GP
WebM ukuya kwi-AV1
I-WebM ukuya kwi-M4V
WebM ukuya kwi-HLS
WebM ukuya kwi-M3U8
WebM ukuya WAV
WebM ukuya kwi-M4A
WebM ukuya kwi-WMA
I-WebM ukuya kwi-MP2
WebM ukuya kwi-M4R
WebM ukuya kwi-AC3
I-WebM ukuya kwi-AMR
WebM ukuya kwi-DTS
WebM ukuya kwi-OPUS
WebM ukuya kwiWEBP
MPEG-2 ukuya kwiWebM
VOB ukuya kwiWebM
M4V ukuya kwiWebM
M4A ukuya kwiWebM
AC3 ukuya kwiWebM
WebM ukuya kwi-ZIP
3,605 Uguquko ukusukela ngo-2020!
Yenziwe ngu nadermx - © 2021 WebM.to